Waa Maxay Sababta Manchester United Aanay Uga Qayb-geli Doonin Champions League Xattaa Haddii Ay Ka Sarrayso Arsenal Iyo Chelsea? – Latest Sports News
Waa Maxay Sababta Manchester United Aanay Uga Qayb-geli Doonin Champions League Xattaa Haddii Ay Ka Sarrayso Arsenal Iyo Chelsea?
Manchester United ayaa dib usoo noolaatay intii uu shaqada tababarenimo qabtayt Ole Gunnar Solskjaer tan iyo bishii December, waxaanay mar soo gashay kaalinta afraaad ka hor intii aanay Arsenal ka faa’iidaysanin.
Fursad kasta oo ay ka hesho kooxda hadda dhibicda ka horreysa, waxay Manchester United dib ugu soo laaban doontaa booska afraad ee kala-sarraynta horyaalka Premier League, laakiin taasi kuma filna inay usoo baxdo tartanka Champions League ee xili ciyaareedka dambe.
Tababaraha reer Norway ee Solskjaer oo 14 ciyaarood oo uu hoggaamiyey Manchester United u horseeday inay guuleysato 12 ka mid ah, hal barbarro ah iyo mid kaliya oo laga adkaaday tan iyo markii uu beddelay Jose Mourinho, waxa hortaalla shaqo adag oo tobanka ciyaarood ee uga hadhsan xili ciyaareedka ay tahay inuu qabto, si uu u rumeeyo hammiga ugu weyn ee naadigan oo ah inay ka qayb-galaan Champions League.
Liverpool oo hoggaanka horyaalka haysa, iyo Manchester City ayaanay cidina u dhowaan karin oo ku dhamaysan doona labada boos ee ugu sarreeya inkasta oo labadooda uu u dhexeeyo xafiiltan horyaalnimada ah oo socon kara illaa kulanka ugu dambeeya.
Tottenham oo u muuqatay in aanay cidina ku qabsan doonin booska kaalinta saddexaad ayaa si lama filaan ah laba guul-darro oo xidhiidh ah ula kulantay labadii ciyaarood ee ugu dambeeyey, waxaanay taasi fursad siinaysaa kooxaha ka hooseeya, taas oo si buuxda loogu qabsan karo booskeeda haddii ay guul-darraysato ciyaarta Arsenal ay garoonka Wembley kusoo dhoweynayso duhurnimada Sabtida.
Haddaba, miyey Manchester United usoo bixi kartaa horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League haddii ay kaalinta afraad ku dhamaysato?
Caadiyan, kooxda soo gasha kaalinta afraad waxay soo gashaa isreeb-reeb usoo gashaa Champions League oo kulamo kaddib ay kusoo biiri karto kooxaha rasmiga ah ee 32-ka ah ee loo sameeyo qori-tuurka, laakiin Manchester United xattaa masoo geli karto isreeb-reebkaas.
Haddaba maxay tahay sababtu?
Dalka Spain oo shantii sannadood ee ugu dambeeyey ay kooxihiisu ku guuleysteen koobka loo tartamayo ee Champions League iyo sidoo kale afar ka mid ah shantii Koob ee ugu dambeeyey ee Europa League, ayaa sannadkana ku jirta saadaasha ugu sarraysa ee labadan tartanba, laakiin Ingiriiska ayaa ku jira saadaasha booska labaad, gaar ahaan tartanka Europa League oo ay ugu jiraan Arsenal iyo Chelsea.
Xili ciyaareedkii 2015-16 ayey UEFA beddeshay sharcigii tartamadan, waxaana sharaf badan loo yeelay Europa League oo kooxda ku guuleysata lagala mid dhigay kooxda hanata Champions League, waxaana loo damaanad-qaaday inay si toos ah uga ciyaarto Champions League xili ciyaareedka xiga xattaa haddii ay booska shanaad ka gasho horyaalka dalkeeda.
Sannadkii 2012, Tottenham ayaa soo gashay kaalinta afraad ee horyaalka Premier League waxaanay haysatay fursad ay kaga qayb-gasho tartanka Champions League, hase yeeshee Chelsea ayaa Bayern Munich ku garaacday garoonkeeda Allianz Arena finalkii Champions League, laakiin horyaalka Premier League ayay ka gashay kaalinta shanaad, waxaanay taasi keentay in Tottenham laga saaro booskeedii afraad oo Chelsea lagu soo buuxiyo.
Sidaas daraadeed, haddii Manchester United ama Tottenham ay ku guuleystaan tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan, laakiin ay hroyaalka Premier League ka mid noqon waayaan afarta kooxood ee ugu dhibcaha badan, waxa midkooda guuleysataa ay ka qayb-geli doontaa tartanka Xiga ee Champions League iyadoo mid ka mid ah afarta kooxood ee ugu dhibcaha badan horyaalkana laga saari doono liiska.
Sidaas oo kale, Arsenal ama Chelsea haddii ay midkood kusoo guuleysato Europa League, isla markaana ay horyaalka ka qaddo afarta kooxood ee ugu sarreeya, waxay boos rasmi ah ka heli doonaan Champions League xili ciyaareedka dambe, iyadoo laga saarayo tartanka kooxda horyaalka Premier League kaga dhamaysata kaalinta afraad.
Kasoo qaad haddii uu horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan uu sidan ku dhamaado: 1. Manchester CIty; 2. Liverpool; 3 Chelsea; 4 Manchester United, laakiin ay labada kooxood ee woqooyiga London ee Arsenal iyo Tottenham ay ku kala guuleystaan Europa League iyo Champions League.
Haddii ay sidani dhacdo, waxa Champions League sannadka dambe ka qayb0geli doona Tottenham iyo Arsenal, waxaana aan ka qayb-geli doonin Manchester United iyo Chelsea.
Si kastaba ha ahaatee, Manchester United waa inay ku ducaysato in Arsenal iyo Chelsea aanu midkoodna ku guuleysanin Europa League maadaama ay ka riixan doonaan booskeeda Champions League.